ChiGerman, Germany Makatuni - GERMANX
1 2 3 Enda pasi
« Reply #11: Musi waNovember 03, 2007, 11:04:13 pm »
« Reply #12: Mbudzi 04, 2007, 12:50:40 ndiri »
zvese zvakanaka kwazvo ....
Nzvimbo Yaunogona Kuenda
« Reply #13: Mbudzi 04, 2007, 12:55:06 ndiri »
Quoted from: Hateimsn ... - Mbudzi 03, 2007 na11: 04: 13pm
Yakatorwa kubva: nisa27 - Mbudzi 04, 2007 na12: 50:40 am
Ndinokutendai varume, ndinofara kuti munoifarira ...
Awa imwe, kashanu, kurohwa kunouya kumunamato. Ndiri kushamisika kana akapedza maawa makumi maviri nematatu pahupenyu hupfupi-hwenyika. uye haana kupedza awa rimwe paupenyu hwakareba., kwakakura sei kukuvadza, kuzvidzvinyirira kwakawanda sei, kwakawanda sei kwe caliphate-pfungwa inofamba!
Nekudaro, mumunamato, mweya, moyo, pfungwa dzino nyaradzo huru. Haisi inorema sechinhu.
Risale-i Nur (Mazwi)
« Reply #14: Musi waNovember 04, 2007, 02:11:41 pm »
« Reply #15: Mbudzi 10, 2007, 03:13:17 ndiri »
Vakanaka kwazvo kwavari ndiErdil Yasaroglu naSelcuk Erdem
« Reply #16: Mbudzi 16, 2007, 12:22:19 ndiri »
« Reply #17: Musi waNovember 16, 2007, 05:36:46 pm »
Iwo akanaka chaizvo makatuni.
« Reply #18: Musi waNovember 30, 2007, 09:30:42 pm »
Ndarasikirwa nehutano hwangu kuseka nemaoko ako, walla ...
Smile ... Mangwana ichava akaipa
« Reply #19: Musi waFebruary 19, 2008, 09:12:55 am »
"Ukatamba nechinhu chakawandisa, unozvikanganisa."
« Reply #20: Kukadzi 19, 2008, 01:06:13 pm »
ehuheuehuehu super ya zvese
Iko mufaro watakaratidzwa wakanga uine fake sevamwe !!!
Ngirozi yaipfeka masikisi edhiyabhorosi yakafanana neyepakutanga!
« Reply #21: Kubvumbi 23, 2008, 12:08:15 pm »
1 2 3 Enda kumusoro